Saxaafad U Dhaqmaysa Sida Sirdoonka !! | Voice Of Somalia
Posted on August 28, 2016 by Voice Of Somalia Image
Saxiibayaal waxaa baryahan inagu soo badanaaya saxaafad u dhaqmaysa sida sirdoonka ,taasoo aad mooddo hanaanka iyo habka ay u shaqaynayaan in uu yahay amma uu u eeg-yahay sida ay u shaqeeyaan hay-adaha sirdoonku.
Saxaafadu waxa ay adeeg-sataa aalado kala wada duwan oo ay dadka warka kusoo gaadhsiiso sida, TV-yada ,qoraalo lagu soo daabaco websit-yada, filimado, sawiro, jaraa’id, buugaag iyo wax kasta oo sahlaaya in bulshadu ay heli karto fariintaasi .
Khasab maahan in qofka suxufiga ahi uu waxarasho heer jamacadeed leeyahay waayo aduunka wariyayasha ugu waawayn qaar ka mida malaha aqoon jamacadeed ,balse waa dad dadaal iyo hawlkarnimo ay daacad nimo ku dheehan tahay sameeyay,waxaa khasab kugu noqonaysa in aad khabrad ka raadsato hay-adaha ku shaqada leh iyo ururada qaabil san.
Shaqaalaha Garoonka Diyaaradaha Muqdisho oo Mushaar la’aan aawgeed Shaqada Ujoojiyay.